पास भएका गाडीसमेत उपत्यकामा ‘नो इन्ट्री’ – GoodNews24 – GoodNews24
पास भएका गाडीसमेत उपत्यकामा ‘नो इन्ट्री’ – GoodNews24
GoodNews24 २३ बैशाख २०७७, मंगलवार १६:४१
काठमाडौँ । सवारी पास बनाइहालेँ, अब ढुक्कसँग उपत्यका जान्छु भनेर तपाईंले धारणा बनाउनुभएको छ ? या त अब सवारी पास बनाइएर उपत्यका जान्छु भन्ने सोच छ । याद गर्नुहोस् ! पास बनाउँदैमा अब उपत्यका छिर्न पाउनुहुन्न । नागढुङ्गा, फरपिङ, मुड्खु, जगाती, जरसिङपौवा या अर्काे कुनै नाकाबाटै फर्कनु पर्ने पनि हुनसक्छ । दुःख मात्रै पाउन सक्ने भएकाले बेलैमा ध्यान पु¥याउनुहोला ?
नागढुङ्गाको सुरक्षामा खटिनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठ बहाना बनाएर पास लिएर आएका गाडीलाई उपत्यकामा प्रवेश रोकिसकेको बताउनुभयो । “आजमात्रै हामीले ८० वटा गाडी नागढुङ्गा नाकाबाट फर्काइसक्यौँ, यो क्रम जारी छ”, श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भयो । उनीहरुले बकाइदाले जिल्लाबाट पास ल्याएका छन् । वास्तविक समस्या के हो ? भनेर सोध्दा, यही हो भनेर प्रष्ट बताउन नसक्नेलाई फर्काइएको छ । बिरामी, काजकिरियामा हिँडेका, अत्यावश्यक काम र पेशा व्यवसायका व्यक्ति सवार गाडी मात्रै पठाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
२३ बैशाख २०७७, मंगलवार १६:४१
Previous बाँझो जमिन प्रयोग गरेमा अनुदान – GoodNews24
Next थर्मल गनले तापक्रम जाँचेर घर फिर्ता – GoodNews24
४ आश्विन २०७७, आईतवार २१:०३
२ कार्तिक २०७७, आईतवार १६:४२
२६ आश्विन २०७७, सोमबार १२:००